नेपाली कांग्रेस भित्र को समस्या र समाधान
डा. राजकुमार राई प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ २ बुधबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस जस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टीको अवस्था यति धेरै खस्केको देखेर यस पार्टी प्रति आस्था र भरोसा राख्ने सारा कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरु ज्यादै दुखित र चिन्तित बनिरहेको सुनिन्छ, देखिन्छ । यसरी नेपाली कांग्रेसको साख गिर्नुमा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरुले जनता र देशको लागि धुमधामै राम्रो काम गरेको कारणले नभई पार्टी भित्रको आफ्नै आन्तरिक कमिकमजोरी नै प्रमुख समस्या भएको बुझिन्छ । किनभने नेपाली कांग्रेसलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका विश्लेषकहरुबाट यहि कुराको व्याख्यान भैराखेको छ । यस आलेखमा पनि नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भलाई जोडेर यसका आधारभूत खम्बाहरु कसरि मक्किदै गैरहेको छ र यसलाई समय मै कसरि जोगाउनु सकिन्छ भन्ने सुझाब सहित पाठक सामु यो विचार प्रस्तुत गरिएको छ।
कुनै पनि एउटा गतिशिल राजनीतिक पार्टीको तीनवटा आधारभूत खम्बा हरु हुन्छन - नेतृत्व, सिध्दान्त/बिचार, र संगठन । जुन पार्टीको यी तीन वटै खम्बाहरु बलिया हुन्छन त्यो पार्टीले जनता माझ राम्रो पकड जमाउँछ । बि. स. २०४८ साल सम्म नेपाली कांग्रेसको यी तीन वटै खम्बाहरु बलिया थिए । तर पछिल्लो कालखण्डमा यी खम्बाहरु बिस्तारै बिस्तारै धमिराले खाँदै काम नलाग्ने बन्ने अबस्थामा गैरहेको छ । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस रुपी घर कुन दिन पुरै ढल्ने हो थाहा छैन ।
पार्टीलाई राम्रो सित हाँक्नको लागि नेतृत्वको ठुलो भूमिका हुन्छ । नेतृत्व भनेको पार्टीको उच्च तहको जिम्मेवार पदमा बसी पार्टी हितको लागि कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्तित्व हुन् भन्ने भुझिन्छ । पार्टीलाई कुन दिशामा कसरि लैजाने भन्ने नेतृत्व संग भिजन, मिसन, र रणनीतिहरु हुन्छ । नेतृत्वले नै कार्यकर्ताहरु सबैलाई समान ब्यबहार गरि मार्गनिर्देशन गर्ने हो । नेतृत्व आफुले पनि बिधान पालना गर्ने र आफु मातहतका अन्य निकायहरुलाई पनि बिधान अनुरुप चल्न लगाउने हो । तर बिडम्बना पार्टी भित्र के भईरहेको छ भने आफु बिधान सम्मत नेतृत्वमा पुग्ने र पछि त्यहि बिधानलाई पंगु बनाउने प्रबृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ । यसमा प्राय सबै केन्द्रिय नेतृत्व को मिलेमतो जस्तो देखिन्छ । किनकि हालै सम्पन्न केन्द्र र प्रदेशको निर्बाचनमा टिकट वितरण सुरु हुनु भन्दा अघि सम्म कसैको केहि बिरोध सुन्नमा आएको थिएन ।
हाल नेपाली कांग्रेस भित्र विभिन्न गुट उपगुटहरु हाबी भैरहेको छ र कार्यकर्ताहरु पनि त्यहि मुताबिक विभाजित छन् । पार्टीगत स्वार्थ भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पुरा गर्न नेताहरु गुट उपगुट चलाइरहेका छन् भने कार्यकर्ताहरु पनि कुन गुटको पछि लाग्दा आफ्नो अभिष्ट पुरा होला भन्दै भौंतारिरहेका हुन्छन । परिणामत: अवसर पाउने अबस्थामा दुख पाका त्यागि कार्यकर्ताहरुको बलिबेदी हुने र स्वार्थी अबसरबादी या आफ्नो मान्छेले मात्र लाभै लाभको भोग गर्ने अवसर पाइराखेकाछन । जसले गर्दा एकातिर कार्यकर्ताहरुमा पार्टी प्रति बितृष्णा पैदा भैरहेकोछ भने अर्कोतिर पार्टी झनझन खुम्चिदै गैरहेकोछ ।
पार्टी भित्र गुट हुनु नराम्रो होइन तर त्यो गुट व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित नभई बिचार केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने बिचारको लागि बहस हुन्छ । बिचार मिल्नेहरु एक ठाउँमा आउँछन् । नयाँ, नयाँ बिचार आउन सक्छ या भएको पुरानो बिचारको बारे छलफल हुन्छ, पुरानो बिचार परिमार्जन हुन सक्छ । बहस पछि बहुमत को बिचार लागु हुन्छ र अल्पमत को बिचार पुन: छलफल को बिषय हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस अहिले बिचारको हिसाबले घरको न घाटको अवस्थामा गुज्रिरहेको देखिन्छ । उसले आफ्नो मौलिक बिचारहरु (राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, र समाजबाद) लाई राम्रो सित बुझ्नु बुझाउनु पनि सकिरहेको छैन र नयाँ बिचार पनि दिन सकिरहेको छैन । बरु यी बिचारहरु लाई प्रतिस्पर्धी पार्टी नेकपा एमालेले आफ्नो बनाइसकेकोछ । २०६२/२०६३ पछि स्थापित राजनीतिक मुद्दाहरु (धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघियता, र समानुपातिक समाबेशिता) लाई नेपाली कांग्रेसले जतिसुकै अपनत्व गर्न खोजे पनि अरुहरुले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।
पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने भनेको बिचारले हो, व्यक्तिगत स्वार्थले होइन, देश र जनताको हित सम्झी सामुहिक स्वार्थले हुने हो । तर शिर्ष नेतृत्वहरु आ-आफ्नै गुट संचालनमा अभ्यस्त रहेकोले अहिले पार्टी बिचार सुन्य अवस्थामा छ । हालै सम्पन्न भएको केन्द्रिय कमिटीको १४ दिन घनिभूत रुपमा चलेको बैठकमा पनि एक-आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने र तिक्तता पोख्ने बाहेक पार्टीको कुनै नयाँ बिचार नआउनु आश्चर्यजनक छ । त्यस्तै आसलाग्दा प्रभाबसाली नेताहरुबाट पनि नयाँ बिचारहरु नआउनु उदेक लाग्दो छ, खालि अरुले गरेको गल्तिको आलोचना गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, मूल कुरो त आफ्नो मौलिक बिचार दिनु पनि हो ।
संगठन भनेको एउटा गतिशील राजनीतिक पार्टीको बिचार प्रबाह गर्ने अभिन्न अंग हो । संगठनको माध्यमबाटै पार्टीको विचार, नीति जनताको तह सम्म पुग्दछ र जनताको राजनीतिक मुद्दाहरु पनि पार्टी समक्ष पुग्दछ । नेपाली कांग्रेसमा पार्टीको मूल संगठन देखि लिएर समाजका विभिन्न तह र तप्कामा पार्टीको बिचार पुगोस र उनीहरुको आबस्यकता अनुसार पार्टीको बिचार, नीति पनि बनोस भन्ने खातिर पार्टी भित्र विभिन्न भ्रात्री संगठनहरुको स्थापना गरिएको छ । जस्तै नेपाल बिद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल जनजाति संघ, नेपाल मुश्लिम संघ, नेपाल तामांग संघ, नेपाल मगर संघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल भूपू सैनिक संघ, आदि ।
संगठन बलियो भयो भने मात्र पार्टीले निर्बाचनमा जित हासिल गर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसको संगठनहरु जता सुकै अस्त ब्यस्त छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । संगठनहरु चुस्त दुरुस्त छैनन् । केन्द्र देखि वडा सम्मका संगठनहरु चलायमान छैनन्, निस्क्रिय छन् । र भ्रात्री संस्थाहरुको पनि उही समस्या छ । प्राय ठुला भ्रात्री संस्थाहरुमा विवादको पोका मात्र छ । त्यस्तै पार्टीको हरेक निकाय हरुमा अनुसाशन को समस्या छ । निर्बाचनको बेलामा उम्मेदवारहरु पार्टीको चुनाब लडेको नभई व्यक्तिगत चुनाब लडेको भान हुन्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई मजबुत बनाउनुको लागि नेतृत्व असल व्यक्तिको हातमा हुनुपर्छ, जसको भिजन क्लियर हुनु पर्यो, जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पार्टी, देश र जनताको स्वार्थ लाई केन्द्रित गर्न सकोस । त्यस्तै पार्टीको बिचार, नीति स्पस्ट हुनु पर्दछ । सँधै भरि उही बिचार सान्दर्भिक नहुन सक्दछ । समय समयमा पार्टी भित्र ब्यापक छलफल चलाई भएको बिचारलाई परिमार्जन गर्ने वा नयाँ बिचार सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टी सरकारमा जाँदा आफ्नो विचार, नीति लागु गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टीलाई बलियो बनाउनु संगठनलाई सँधै चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्छ । पार्टीले संगठनमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र अनुसाशन भंग गर्नेलाई दण्डित पनि गर्नु पर्छ । अवसर दिंदा मुल्यांकन को आधारमा हुनुपर्छ । अन्त्यमा: नेपाली कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने हो भने माथि उल्लेखित तिन वटा खम्बाहरुलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ । होइन भने दुइवटा विकल्प को लागि तयारि हुनु पर्दछ । एक -कम्युनिस्टहरु कहिले फुटछन् पर्खेर बस्ने । दोस्रो - बचेखुचेको समानुपातिक भाग खाएर सन्तोष मान्ने ।
ईमेल : drrkrai9@gmail.com